Fanontaniana & Valiny niarahana tamin’i Romas, miasa ho fandrisihana misimisy kokoa ireo mpampiasa ny fiteny Karaim · Global Voices teny Malagasy
Fanontaniana & Valiny niarahana tamin'i Romas, miasa ho fandrisihana misimisy kokoa ireo mpampiasa ny fiteny Karaim
Voadika ny 08 Jona 2022 5:15 GMT
Lapa ao amin'ny nosy Trakai, saripika an'i Filip Noubel ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Anatin'ireo andiany ataonay amin'izao fotoana izao mba hanasongadinana ny asan'ireo mpikatroka mampahafantatra aty anaty habaka nomerika ireo fiteny eorôpeàna vitsy an'isa sy fitenim-paritra, tianay ny hanasongadina an'i Romas (@ChuluuBat) izay niasa ho fampiroboroboana ny fiteny Karaim, indrindra fa ho an'ilay tenimparitra Litoaniàna manokana antsoina hoe Trakai, amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fianarana ilay fiteny any anatin'ireo karazana habaka, indrindra fa ny fampianarana azy ety anaty tambajotra. Fantaro bebe kokoa ny momba ireny ezaka ireny ao anatin'ity tafa tamin'ny alàlan'ny imailaka manaraka ity, notarihan'ny Rising Voices.
Rising Voices (RV): Lazao anay ny mombamomba anao sy ny asanao mifandraika amin'ny fiteny.
Romas (R): Izaho no Romas, teraka sy lehibe tao avaratr'i Litoania. Tenin-dreniko ny Karaïm, izay niresahako hatrany amin'ny garabola [indrindra fa tao an-trano]. Rehefa nandeha ny fotoana, io fiteny io, nampiasaina betsaka tao an-trano sy/na tao anivon'ny vondrompiarahamonina kelin'ireo Karaïm, teny anivon'ny mpihavana, dia nosovohan'ny Litoaniàna tsikelikely tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, izay nampiasaina totoafo sy tamin'ny fomba navitrika. Taorian'ny nandaozako ny tany nahaterahako mba handeha ho any an-drenivohitra handranto fianarana tao amin'ny anjerimanontolon'i Vilnius, [fianarana manokana ny ‘philologie‘ rosiàna], nanomboka nihena ny hadirin'ny fampiasàko ny Karaim.
Eto Vilnius sy Trakai, ny fihaonana sy firesahana amin'ireo mpikambana anatin'ilay vondrompiarahamonina, indrindra fa ireo zokiolona, dia manome ahy vintana hampiasàko ny fiteny Karaim, ary hatramin'ny raharaham-pivavahana any amin'ireo trano fivavahana (antsoina hoe Kensa amin'ny fiteny Karaim), na ireo hetsika ara-kolontsaina sasantsasany amin'izay fotoana izay. Hatramin'izay ny Karaim dia nahazatra [notenenina], fa tsy nosoratana na hoe izaho no nikirakira azy.
Mbola mampiasa ny Karaim aho, na dia tena hoe tsy fahita firy aza, azoko eritreretina ny hampiasa azy, mandrafitra lahatsoratra aminy, ary ny antony dia noho ny fahalianako amin'ny resaka Turcologie, philologie sns… Raha ho ahy, tsaroako foana fa ny fiteny Karaim dia fiteny tiorka andalam-paharingànana fampiasan'ny vondrona Kipchak, izay tsy ôfisialy sy tena zara raha ampiasaina, tsy teratany, tsy mety ampitaina, fiteny matory, ary hita any amin'ny faritra tena avaratra-atsinanana indrindra ao Eorôpa.
Araka ny fanadihadiana iray vao haingana, tsy ampy 20 ireo olona, indrindra fa ny zokiolona, ao Litoania no afaka mampiasa, miteny ary mamaky ny Karaim. Misy olona vitsy ihany koa sisa tavela ao Pôlônina. Ny sampany amin'ny Karaim ao Litoania dia antsoina hoe tenimparitra Trakai avy amin'ny Karaim, na lazaina tsotra fotsiny ho ny fiteny Karaim ao Litoania. Misy tenimparitra roa hafa [efa maty na efa tsy dia ampiasaina intsony]: Lutsk-Halich manerana ny andrefan'i Okraina sy ny Karaim Krimeàna. Tsy mihevitra ny tenako ho toy ny mpikatroka ho an'ny fiteny aho.
R: Nandritra ny fisian'ilay valanaretina no tena tonga tamiko ny hevitra hanomboka fampianarana samihafa ny fiteny Karaim tety anaty tambajotra. Fandraisana andraikitra noraisin'ireo Karaims sasany na ireo solontena avy amin'ireo teraka Karaim, monina any amin'ny tanibe Litoania no betsaka aminy, na any Pôlônina. Ny teny niraisana nentina nampianatra dia ny Anglisy — mety ho sambany teo amin'ny androm-piainako — nahitàna lesona fohy nosarantsarahana atao ho an'ny ankizy, fampianarana mitokana [iray, na roa-sy-iray], ny famakiana litorjia amin'ny fiteny Karaim sy ireo fifampiresahana andavanandro anatina vondrona lehibe kokoa [olona 5 hatramin'ny 8].
Azo lazaina ho nanomboka niaraka tamin'ireo fampianarako mihitsy, nisy ary mbola mitohy misy ny fampianarana ny fiteny karaim ety anaty tambajotra ho an'ireo izay mipetraka ao Litoania [ny ankamaroany] ary ao Pôlônina, amin'ny fampiasàna ny rosiàna, ho an'ny olondehibe, ataona profesora matihanina amin'ny fampianarana teny anglisy [teraka tao Litoania]. Amin'izao fotoana izao, nitsahatra ny fampianarako Karaim. Manana fampianarana isankerinandro ety anaty tambajotra ihany izahay ataona mpikambana iray avy ao anatin'ny taranaka Krimeàna vaovao [izay vao nifindra avy any Krimea ho ao Litoania]. Ary io no karazana fampitàna iray mankany amin'ireo andian-taranaka manaraka na, fitohizana tsotra izao fotsiny ho an'ireo foko izay liana be amin'ny resaka Karaim. Amin'izao fotoana izao, tafiditra ao anatin'io tetikasa io ny famakiana teny sy ny fandalinana araham-panazavana “philologique” an'ireo andinin-tsoratra niandohana avy amin'ny dadaben'ny iray amin'ireo mpanatrika ny fampianarana.
Ny lovam-pianakaviana vita soratra notanisaina etsy ambony dia nosoratana tamin'ny milina mampiasa endri-tsoratra latina, ary tsy mbola naseho velively na noresahana tany aloha tany, rahatoa ka, nandritra izay fotoana izay, ny andaniny sy ny ankilany – ny tomponandraikitry ny fampianarana sy ireo mpanatrika – samy afaka naneho fihetsehampo tsy nampoizina avy amin'ny fitenindrazan-dry zareo, izay afaka manome fahatsapana hoe ry zareo dia misoratra ao anatin'ny fitohizan'ny ezaka mahagaga hitazonana ilay fiteny mba ho velona. Tato anatin'ny taona vitsy, nisy marobe ireo fikarohana tao Tiorkia sy Pôlônina, nitondra fandraisana anjara sarobidy tsy hita pesimpesenina tamin'ny fakàna ny fiteny Karaim. Iray tamin'ireo tetikasa goavana indrindra ho fandraketana ny lovan-tsoratra karaim no napetraka tao Pôlônina, tao anatina tetikasa iray eorôpeàna midadasika kokoa, ary hifarana amin'ny 2024. Hita ao anatin'io ireo fandikàna samihafa ny Baiboly ho amin'ny fiteny Karaim efa tany amin'ny taonjato faha-18 na 17 mihitsy aza.
Saripika an'i Filip Noubel ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
RV: Inona avy ireo antony manosika anao hahita ny fisian'ny fiteninareo any anatin'ireo habaka nomerika?
R: Ilay fihetsehampo mahatsiaro afaka mirehareha sy ny fahatsapàna ny fahamendrehan'ilay fitenin'ireo razambe nolovaina no antony tena manome aingampanahy – ny tenindrenin'ny tena- izay mbola velona sy mitohy miaina nandritra ny efa ho eninjato taona, na dia tamin'ny fomba tsy nampiasàna soratra aza, tao anaty tontolo maro tena samihafa tanteraka; voatahirin'ilay fiteny ho ao anatiny ireo singa avy amin'ny voambolana tiorka madio tsy misy pentina.
RV: Farito ny sasantsasany amin'ireo fanamby izay manakana ny fiteninareo tsy ho ampiasaina feno ety amin'ny aterineto?
R: Ny tena antony fototra manakana ny fampiasàna ny fiteny Karaim ety anaty tambajotra dia ny tsy fisian'ny faharisihana, ny fikasàna sy faniriana mivaivay, eny fa na dia eny anivon'olontsotra vitsy aza. Tsy ny tsy fahampiana na ny tena fahakelezan'ny isan'ireo mpianatra ny fiteny Karaim ihany no fanamby atrehana. Rehefa nitombo tao anatina fianakaviana Karaim madio rano ianao [rà iraisana], ary na ireo dadabe sy bebe aza, sy ireo taranany [ray aman-dreny] tsy manao hetsika kely akory mankany amin'ny fampiasàna sy fanazavana ny lova ara-kolontsain-dry zareo – ny fiteny, ny fombandrazany, sns — ary, ny mifanohitra amin'izay aza no misy, miezaka fotsiny izy ny tsy hiraharaha na hanakona ny maripamantarana ara-kolontsainan'izy ireo.